कोरोना जितेर घर फर्केको केहि दिन नहुँदै कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना, आइपर्यो फेरी यस्तो समस्या – Classic Khabar
June 7, 2021 138
बरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना भएका छन्। हिजो अचानक मुटुमा समस्या आएपछि श्रेष्ठ गंगालाल अस्पताल भर्ना भएका थिए।उनको मुटुको एन्जियोप्लास्टी गरिएको उपचारमा संलग्न डा धर्मा यादवले बताए। हिजो गंगालाल भर्ना भई एन्जियोप्लास्टी गरेपछि सघन उपचार कक्ष (आइसियू) मा राखिएका भएका श्रेष्ठलाई आज डिलक्स रुममा सारिएको समेत डा यादवले बताए। हाल उनको अबस्था खतरा मुक्त रहेको पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। केही अघि मात्र उनी संक्रमणबाट मुक्त भएर घरमा आराम गरिरहेका थिए।
को हुन् मदन जसलाई नेपालीले अत्यतै मन पराउछन् ? कलाकार श्रेष्ठको जन्म वि.सं. २००७ साल वैशाख ७ गते काठमाडौँमा भएको हो। उनी रामकृष्णलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मीका एक्ला छोरा हुन्। त्यसो त अर्की आमाका तर्फबाट भाइ र दुई बहिनी छन्। उनका भाइ नीरव श्रेष्ठ अमेरिकामा नै छन्। बहिनीहरू साधना र सविनाचाहिं यतै छन्। उनका पिताका चारवटा पत्नी थिए। मदनकृष्ण जन्मेको ६ महिनापछि उनकी आमा लक्ष्मी बितिन्। त्यसपछि अर्को विवाह गरे। उनी पनि बितेपछि फेरी अर्को विवाह गरे। दुई पत्नीबाट जायजन्म भएनन्। कान्छी आमाले मदनकृष्णलाई छोराकै व्यवहार गर्छिन् र मदनकृष्ण भन्छन्, आमाकै जति माया मैले कान्छीआमाबाट पाएको छु।
Prevसधैंका लागि छोडेर गयौ बिनिता ,तिमी बिदेशबाट फर्केपछी भेट्ने भन्दा भन्दै एती धेरै दुर भयौ
Nextपाँच वर्षअघि करेन्ट लागेर दुवै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेको संर्घषको कथाले सबैको मन रुवाउँछ, हात गुमाएपछि पतिले पनि साथ छाडे, हेर्नुहोस् भिडियो